Naqshadeynta Calaamadaha Tilmaamaha Tallaabo-tallaabo ee SEO
In ka badan laba malyuun oo blog ah ayaa la daabacaa maalin kasta. Sidaa darteed, waa suurtagal in aad ku noolaato internetka haddii aadan u keenin martidaada wax alaab tayo leh si aad u akhrido. Oliver King, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Macaamilka Maareynta Macaamiil, ayaa sheegaya in aad blog ka dhigan karto guul kaliya marka maqaaladahaagu si fiican u qoran yihiin oo ay ku jiraan macluumaad badan. Qeybaha kala duwan ee bloggers ma yaqaanaan wax ku saabsan SEO. Dunida adduunka oo ka badan boqolkiiba sagaashan waayo-aragnimadooda internetka ayaa ka bilaabma boodbood s, oo muujinaya bogga ugu horeeya ee Google waa suurtogal keliya haddii aad si habboon u samaysay SEO - incasso online.
Raadinta mashiinka raadinta waa nidaam kaas oo ku lug leh farsamooyinka iyo hababka qaarkood si aad u sameyso boggaaga muuqaalka natiijooyinka raadinta. Farsamooyinkaasi waa lacag ama lacag la'aan ah oo hubiya kalsoonida iyo muuqaalka goobtaaga dhawr bilood gudahood. Naqshadeynta SEO ama raadinta moobiilka waa dhamaanteed oo ku saabsan qaabeynta boggaaga iyo mawduuciisa si ay makiinadaha raadinta u muujiyaan si ay u muujiyaan natiijooyinkooda. Waa muhiim in la sameeyo SEO si markaa matoorada raadinta ay ku siiyaan darajo ka fiican goobtaada. Tusaale ahaan, haddii aad qoraal ku qortay sida loo diyaariyo baasto, waxaad rabtaa matoorada raadinta si ay u muujiyaan qof kasta oo raadinaya weedhaha "baastada" iyo "noodles recipes." Hagaajinta gawaarida raadinta, waxaa suurtagal ah in maqaalkaga la dhigo oo aad hesho gaadiid badan.
White Hat iyo Black Hat
Ka hor intaanad bilaabin SEO, waxaa muhiim ah inaad ogaatid farqiga u dhexeeya cad cad SEO iyo koofiyadaha madow SEO . Waa ammaan in la yidhaa naqshadaynta search engine waa bedelka ciyaarta, laakiin waa inaad qaadatid noocyada saxda ah ee saxda ah. Haddii aad rabto darajo wanaagsan oo loogu talagalay boggagaaga mudo dheer, waa inaad tagtaa koofiyadaha cad cad iyo diirada saari karta mawduucaaga kaliya mashiinnada raadinta. Koofiyadaha cad cad waa farsamo si loo dhiso ganacsi joogta ah oo internetka ah, halka Koofiyadda SEO-ka ay tahay hab sharci darro ah oo si dhaqso ah u burburin doonta boggaaga natiijooyinka mashiinka raadinta.
SEO-ga SEO-off-Page SEO
Bogga SEO-ku wuxuu ku lug leeyahay isticmaalka ereyada muhiimka ah, qorista tags, sharaxaad meta iyo in la hagaajiyo mawduucaaga iyo cinwaanada natiijooyinka raadinta raadinta. SEO-ka-off-ka waa markaad dhisto xiriirka boggagaaga iyadoo la adeegsanayo boosteejada martida, ka hel faallooyin ku saabsan qoraaladaaga blog-kaaga, kana qaybgalayaasha akhristayaasha shabakadaha warbaahinta bulshada.
Ugu danbeyntii, waxaan jeclaan lahaa in aan sheego in aad qori kartid tayada oo aad iska ilaaliso in aad kumbuyeysid shaqo kale. Tani ma siin doonto natiijooyinka la rabay, makiinadaha raadiyeyaashu waxay liis gareeyaan boggaaga internetka isla markiiba. Waxaa suurtagal ah inaanay suurtagal ahayn in aad si fudud udhaqaajiso mawduucaaga; waxaa lagaa doonayaa inaad abuurto qiyaaso warbaahinta bulshada ah si aad u soo jiidato dad badan iyo dad badan iyo si loo hagaajiyo waxqabadka guud ee goobtaada.